LEGO Millennium Falcon Black Friday သဘောတူညီချက်များ ၂၀၂၁ Brick Fanatics
Lego Star Warsအကောင်းဆုံးနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးအစုသည် ၂၀၂၁ တွင်စင်ပေါ်တွင်ဇွဲရှိရှိရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဖြစ်လိမ့်မည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon မည်သည့်သိသိသာသာလျှော့စျေးကိုမဆိုကြည့်ပါ Black ကသောကြာနေ့? Han Solo ရဲ့နာမည်ကျော်ကုန်တင်သင်္ဘောကိုနိုဝင်ဘာ ၂၆ မှာကျင်းပဖို့ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်တွက်ချက်ပါတယ်။
LEGO Millennium Falcon Black Friday သဘောတူညီချက်များ
75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ၎င်းသည်အကြီးဆုံးနှင့်စျေးအကြီးဆုံးအဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၌ပထမဆုံးခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် Lego ,7,541 649.99 / $ 799.99 / € 799.99 အတွက် ၇၅၄၁ ကျပ်ဖြင့်ရက်စွဲသတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းသည် p တွင်လကြတ်ခံရပြီးဖြစ်သည်art ဖြင့်ရေတွက်ပါ ၁၀၂၇၆ Colosseum နှင့် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံဒါပေမယ့်အဲဒါကအကြီးဆုံးဘဲ Lego Star Wars အချိန်အားလုံး (ဟုတ်ပါတယ်၊ အကြီးဆုံးဘဲ Lego Star Wars Millennium Falcon ဖြစ်သည်။ )
သင်နောက်ဆုံးပေါ်ငွေသားတစ်ပြားကိုစုဆောင်းရန်မျှော်လင့်ပါက Lego UCS Millennium Falcon၊ Black Friday သည်အလားအလာရှိသောလျှော့စျေးများမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ မျှော်လင့်ထားသော VIP အမှတ်ပေးပရိုမိုးရှင်းများနှင့်အတူပါ ၀ င်သောလက်ဆောင်များကိုဖြစ်စေ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
Lego Star Wars Millennium Falcon နှစ်ဆ VIP အမှတ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည် VIP အမှတ်နှစ်ဆမြှင့်တင်ရေးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည် Lego Black Friday နှင့် Cyber ​​Monday မတိုင်မီတစ်ပတ်တွင်ကျင်းပမည့် VIP Weekend ဖြစ်သည်။ တူညီတဲ့သဘောတူညီချက်က ၂၀၂၁ မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအတည်မပြုရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီလိုဖြစ်ရင်မင်း VIP တွေအများကြီး ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်မင်း ၀ ယ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်။ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon.
နှစ်ဆ VIP အမှတ်များသည်အနာဂတ် ၀ ယ်ယူမှုများ (သို့မဟုတ်အထူးသီးသန့်ဆုလာဘ်များ) အတွက်သုံးစွဲရန်ငွေသားပြန်အမ်းရန် ၁၀% လျှော့စျေးနှင့်ညီမျှသည်။ သင်ဟာအသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Lego VIP အစီအစဉ်အားသာချက်ကိုရယူပါ၊ သို့သော်အခမဲ့ပါ ၀ င်နိုင်ပြီးအမှတ်တံဆိပ်ကိုစောစောရယူခြင်းအပါအ ၀ င်သီးသန့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည် အသစ်အစုံ.
LEGO Millennium Falcon လက်ဆောင်များကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းထုတ်ကုန်များ
ငါတို့မှာတော်တော်အာမခံနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိရင် Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ် Black Friday သည်၎င်းဖြစ်သည် Lego ပွဲစဉ်အတွင်းအုပ်စု၌အနည်းဆုံး ၀ ယ်ယူနိုင်သောလက်ဆောင်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ Black Friday GWPs များအတွက်အရည်အချင်းစစ်အသုံးစရိတ်အတွက်ယခင်မျက်နှာကြက်သည်ပေါင် ၂၀၀ / ဒေါ်လာ ၂၀၀ / € ၂၀၀ ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ယခုနှစ်မြှင့်တင်ရေးအစုံများကအနားသတ်ကိုကောက်ယူလျှင်ပင် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon မည်သည့် freebies များကိုမဆိုအိတ်ထဲသို့လုံလုံလောက်လောက်ထားသင့်သည် Lego Group မှကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ရှိပါတယ်။
LEGO Millennium Falcon အငြိမ်းစား Black Friday သဘောတူညီချက်များ
သတင်းကောင်း: 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon အနည်းဆုံး ၂၀၂၂ ခုနှစ်မကုန်ခင်အထိစင်ပေါ်တွင်ရှိနေမည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးအမြဲစိမ်းစိမ်းလန်းမြေအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည် Lego Star Wars လုပ်ငန်းစဉ်၌သတ်မှတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤနှစ်သည်မရလျှင် Ultimate Collector Series အစုံကိုကောက်ယူရန်သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏အငြိမ်းစားယူမည့်ရက်ကိုမမျှော်လင့်ဘဲယူရန်ဆုံးဖြတ်သော်လည်း၎င်းကိုရယူရန်တစ်နှစ်တာ၏စျေးအသက်သာဆုံး (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအကျိုးအရှိဆုံး) အချိန်ဖြစ်နိုင်သေးသည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ လူအပေါင်းတို့သည်ထွက်စစ်ဆေးရန် Lego Black Friday အထူးလျှော့စျေးများနှင့်ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရန်မျှော်လင့်ထားသောကမ်းလှမ်းချက်များ၊ သတင်းများကိုကြည့်ရန်ဤစာမျက်နှာကိုပုံမှန်ပြန်သွားပါ Lego Millennium Falcon သဘောတူညီချက်များ